I-Red Canyon Retreat
Isetingi yabucala nethe cwaka yokuphumla kunye nee-adventures nje ngaphandle komnyango. Iindlela zokuhamba ngebhayisekile kunye neentaba, iiklasi zeyoga, iindawo zokutyela, ubugcisa, igalufa, iwayini kunye nokhenketho lwebhiya, kunye nokuthenga kufutshane. Okanye uphumle nje kwibhafu eshushu yamanzi anetyuwa okanye idama lokuhlala lamanzi anetyuwa umamele isandi somoya okanye uziphose kwi-hammock. Iimbono zeRed Rock zeBell Rock, Courthouse, kunye neCastle zilindile. Simi kwiVOC, kwilali yase-Oak Creek, iimayile ezimbalwa emazantsi eSedona ngokufanelekileyo, kude nengxinano.
Mna nomyeni wam uMark sifumaneka ngokulula ukuba unayo nayiphi na imibuzo / iimfuno, kodwa siyavuya ukukunika ubumfihlo obupheleleyo. Igaraji yohlula iRed Canyon Retreat kwindlu esihlala kuyo. Indawo yokungena isuka egaraji. Ukuze uyonwabele, sibonelela nge-ionized, ialkaline, amanzi ahluziweyo, ikofu, kunye neTuft & Nenaliti yoomatrasi kunye nemiqamelo. Ngasemva kweyadi kukho imbono yamatye abomvu, ibhafu eshushu enamanzi anetyuwa, ichibi lokuhlala lamanzi anetyuwa yangaphandle ishawari yangaphandle, ingxangxasi, kunye nengca yengca yokudlala. Iyadi engaphambili inendawo yokupaka eninzi kunye nendlu yokulala yabantu ababini. Ngaphandle komnyango kunye nokuhamba okufutshane ukuya kwisitrato kuqala umzila ukuya phezulu kwi-Wild Horse Mesa okanye kwiSikhululo seRanger okanye uhambo olufutshane lommelwane. Malunga nekhilomitha enye kude kunye nokuhamba okumnandi yivenkile yekofu enkulu, ephakathi ukuya kwindawo yokutyela ephezulu kunye neevenkile. Igumbi lizaliswe ngumsebenzi wegcisa lendawo elaziwayo nelihlonitshwayo, uClark Sheppard. Ndwendwela isitudiyo sodongwe sikaJerry esingummelwane wethu ngendalo entle. Ukuba uyanqwenela, cwangcisa iklasi yeyoga yabucala kunye nam kwisitudiyo sasekhaya okanye ngaphandle ezindleleni okanye ujoyine iklasi yempelaveki kunye nabamelwane. UMarko ngumkhweli webhayisekile yasentabeni kwaye unokucebisa iindlela ezilungele uhambo lwakho. Singacebisa iindlela ezigqwesileyo zokuhamba intaba, iivenkile, kunye neendawo zokutyela.
4.99 · Izimvo eziyi-327
Bonisa iingxelo zokuhlola eziyi327
Umzila we-Wild Horse Mesa uqala ekupheleni kwesitrato sethu ngemibono eyoyikisayo yeBell Rock, Courthouse kunye neLee Mountain. Ngaphantsi nje komgama weekhilomitha zokuhamba okanye ukuqhuba kuya kukuzisa kwivenkile ebalaseleyo yekofu, iresityu, i-spa, igalari, istudiyo se-yoga kunye neevenkile. Unako nokuhamba ecaleni kwakho ukujonga istudiyo somdongwe esinetalente sommelwane.
Zive ukhululekile ukuqhagamshelana nathi ngemibuzo / izicelo. Silapha ngenxa yakho.
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Sedona